11 / 07 / 2021 11 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 426 Views စာ0မှတ်ချက် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, အားကစားပြိုင်ပွဲ, Lego, Lego ဂိမ်းများ, Lego ကောလာဟလများ, Lego Star Wars, Lego Star Wars: Skywalker Saga, Lego ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, Star Wars, Skywalker စစ်ကိုင်း, time Warner, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, Warner Bros, Warner Bros., Warner Bros. အားကစားပြိုင်ပွဲ, Warner Bros. Interactive မှ
Warner Bros. သည်သူတို့၏စတူဒီယို ၂ ခုအပါအဝင်ရောင်းရန်စဉ်းစားနေကြောင်းပြောဆိုမှုများကိုတုန့်ပြန်ခဲ့သည် Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း's TT ဂိမ်းများ။
ပါဝင်ပတ်သက်နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလ Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း Warner Bros. Interactive မှဂိမ်းထုတ်လုပ်သူများ NetherRealm စတူဒီယိုများနှင့် TT Games များကို၎င်းတို့၏မီဒီယာကုမ္ပဏီ Discovery နှင့်မပေါင်းစည်းမီရောင်းချရန်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်
သင်သည်မူလဇာတ်လမ်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖတ်နိုင်သည် ဒီမှာဒါပေမယ့်အချုပ်အားဖြင့်တော့ TT Games ဟာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်နောက်ထပ်အဟန့်အတားတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရ ဦး မယ်လို့ထင်ရပါတယ် Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း။ ဤကောလာဟလများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်မကြာမီအနာဂတ်စတူဒီယိုနှစ်ခုမည်သို့ဖြစ်သွားမည်ကို Warner Bros. ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်လိုက်သည်။
“ NetherRealm စတူဒီယိုများနှင့် TT Games များသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ကိုကျွန်ုပ်အတည်ပြုနိုင်သည်art ၏ Warner Bros. Games နှင့်အတူအားလုံးပါဝင်ကြောင်း Warner Bros. Games မှဆက်သွယ်ရေးနှင့် PR အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ Remi Sklar မှပြောကြားခဲ့သည်။ ဂိမ်းကစားသူ.
၎င်းကမူရင်းကောလာဟလများမှားယွင်းကြောင်းနှင့် TT Games ၏ကံကြမ္မာသည် Warner Bros. Interactive ၏လက်ထဲတွင်ရှိနေသေးသည်သို့မဟုတ်မကြာမီလူသိများလာဖွယ်ရှိသော Warner Bros. Discovery Interactive သို့ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။
ပုံပြင်အပြောင်းအလဲရှိပါကသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသစ်တင်မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အရင်ကထက်ကျွန်ုပ်တို့မသိခဲ့ကြပါ Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း။ အားလုံးအတူတူပါပဲ၊ TT Games ကိုရောင်းချခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားနိုင်ပါ ကောင်းတဲ့အရာ ကုမ္ပဏီနှင့်ကစားသမားနှစ် ဦး စလုံးသည်။
← LEGO NINJAGO ဗီဒီယိုစီးရီးအသစ်များယခုပြီးဆုံးသွားပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ်လား။
LEGO နှင့်ပိုကီမွန်ချစ်သူများသည်၎င်းတို့အားလုံးကိုတည်ဆောက်ရမည်ဟုသက်သေပြသည် →